3 Ogidi ahịa
Mmeri, Nọgide, Na-eto… Nke ahụ bụ mantra nke ahịa akpaaka ụlọ ọrụ Right On Interactive. Ulo oru akpaka ahia ha adighi elekwasị anya n'inweta - ha na-elekwasị anya na ndu ndi ahia na ichota ndi ahia, na-ejigide ndi ahia ha, ma na-eme ka mmekorita ha na ndi ahia ha. Nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa nyocha na-adịghị agwụ agwụ maka nduzi.
T2C jikọtara infographic a na-ajụ ajụjụ dị mkpa, gịnị kpatara na anyị anaghị edozi ngalaba azụmaahịa anyị otu a? Kedu ihe kpatara na anyị enweghị ndị isi n'ime nzukọ ahụ nnweta, njigide, na ndị ahịa na-emepe emepe? Ọ bụ nnukwu ajụjụ ebe ọ bụ na anyị na-ele ka ọtụtụ ndị otu azụmaahịa na-abanye n'ime ọgbọ na-enweghị ohere ị ga-arụ ọrụ na mmekọrịta ndị ahịa ugbu a ma ọ bụ na-eto mmekọrịta ndị ahụ.
A haziri nzukọ gị n'ụzọ dị otú a? Kedụ maka Key Performance Indicators (KPIs) ha, ha lekwasịrị anya gafere ụdịdị dị iche iche nke usoro ndụ ndị ahịa? Echere m na nke a nwere ezigbo uche! Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhazi ndị otu gị na ndị KPI gburugburu ahịa, ahụmịhe na iguzosi ike n'ihe - ị nwere n'ezie usoro ndụ azụmaahịa lekwasịrị anya na-azụ ahịa!
Tags: nnwetammepe ahịaahịa ndụahịa ahịa ndụdevelopmenteto etona-ogidi ahiaogidi nke ahianjigidenri na mmekọrịtaNkechimmerimmeri na-eto
Sep 24, 2014 na 2:42 PM